Dhageyso Faahfaahin Laga Helayo Weerarka Siinka-dheer. – Calamada.com
Dhageyso Faahfaahin Laga Helayo Weerarka Siinka-dheer.
calamada December 10, 2016 2 min read
Geesi ka mid ah guutada Istish-haadiyiinta ayaa maanta weerar Istish-haadi ah ku beegsaday xero ku taalla duleedka magaalada Muqdisho oo ay joogeen Maleeshiyaad fara badan.
Xerada uu weerarkan ka dhacay waxaa maalma ka hor soo gaaray maleeshiyaadka uu Mareykanka soo tababaray ee loo yaqaano Alpha Group balse maanta ayaa la filayey in ay halkaas isaga guuraan, kuna wareejiyaan xerada maleeshiyaad kale oo Soomaali ah oo ay soo tababartay dowlada Imaaraatka carabta kuwaas oo maanta soo gaaray halkaas.
Intii lagu gudajiray xaaladdii isbedalka ayaa waxaa xerada xoog ku soo galay geesi hogaaminayey gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa kaas oo goobta ku beegsaday ciidamadii cadowga ee xerada ku sugnaa.
Ugu yaraan 9 askari ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay goobta, Sidoo kalena lagu dhaawacay tiro intaas ka badan.
Shan ka mid ah askarta la dilay waxay ahaayeen maleeshiyaatka loo yaqaano Alpha Group ee uu Mareykanka soo tababaray, halka afarta kalena ay ahaayeen maleesiyaad kale oo uu soo tababaray imaaraatka oo la doonayey in lagu wareejiyo amaanka xerada.
Wararka qaar ayaa sheegaya in sarkaal sare oo ka tirsan Ashahaada la dirirka uu ka mid yahay dadka meesha ku dhintay sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyadeena.
Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in dhaawacyo fara badan oo shan ka mid ah ay halis yihiin goordhow la geeyey Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho, halkaas oo xaalkooda lagula tacaalayo.
Waxaa suuragal ah in ay jiraan qasaare intaas ka badan balse goobta ayaa weli ah meel u xiran cadowga, waxaana adag in la ogaado qasaaraha kama dambeysta ah ee uu geystay weerarka.
Dhanka kale Weerar gaar ah oo ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ka fuliyeen isgoyska Towfiiq ee degmada Yaaqshiid waxey ku dileen hal askari labo kalane weey ku dhaawaceen oo ah maleeshiyaatka lacagaha baada ah ka qaado dadka iyo gaadiidka Muqdisho.
Previous: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 11-03-1438 Hijri
Next: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Idaacadda Andalus 11-03-1438 Hijri.